Ahoana ny fialana amin'ny fialonana?
Psychology and Relationships Fitiavana
Ny olona rehetra efa nialona dia mahafantatra fa tena mahagaga ny fibodoana. Mafy ny fihetseham-pon'ireo olona feno fahasimban-tsaina, noho ny fanehoan-keviny tsy mitombina amin'ny fisehoan-javatra mitranga, izay mitarika amin'ny hetsika tsisy saina sy mampidi-doza. Mialà amin'ny herin'ny maizina ny fahasalamana, manakana ny fifaliana amin'ny fiainana , ary mety hitarika fahasimbana sy fahasalamana samihafa izany. Mazava ho azy fa ilaina ny manaisotra ny filana mampidi-doza toy izany, ny fomba hanatanterahantsika izany ary hiresaka isika.
Fialam-boly vehivavy sy lehilahy
Fantatry ny rehetra fa ny vehivavy sy ny lehilahy dia mitodika manerana izao tontolo izao, ary mialona amin'ny antony samihafa. Ny fialonana amin'ny lehilahy dia mifototra amin'ny faniriana hifehy ny zava-drehetra na hahazo hery tsy voafetra amin'ny vehivavy iray. Amin'io tranga io dia mety hampisy fifandraisana amin'ny lehilahy hafa, ohatra, ny fanosihosena, ohatra, mamirapiratra kokoa, na kely kokoa amin'ny asa. Ny karazan'olona hafa azo antoka dia ho saro-piaro, raha toa ka misy ahiahy amin'ny tsy fifankahazoana - ny tsiambaratelon'ny vehivavy eo amin'ny fiainany manokana, miresaka amin'ny lehilahy hafa, miafina fifandraisana amin'izy ireo. Ny olona amin'ny sekretera famoronana dia matetika tafiditra ao anatin'ny tetikasany ka tsy hialona afa-tsy rehefa mianatra momba ilay vono olona izy ireo.
Ny psikolojia eo amin'ny antony mahatonga ny fialonana vehivavy dia mitaky ny faniriana hanamafy hatrany ny fahambonian'ny maha-izy azy amin'ny vehivavy hafa, ary ny fanatrehan'ny lehilahy mikarakara sy mahomby dia fanamafisana tsara izany. Ny vehivavy koa dia mialona satria tsy manana fitiavana sy fitiavana izy ireo, noho izany ny fahatsapana ny tsy fandriam-pahalemana izay mitarika ny olona ho tezitra. Matetika dia misy vehivavy izay mieritreritra fotsiny fa adidiny ny mitazona ny vadiny "amin'ny làlana fohy", eny an-dalana, miaraka amin'ny ankizy koa izy ireo. Amin'izao tranga izao, ny fahasarotana dia matetika ny fepetra, satria ny anton'izany dia matetika - ny fiverenana amin'ny asa, ny antso an-telefaona avy amin'ny mpiara-miasa, na ny voninkazo na ny fanomezana aza dia mety hitondra ahiahy, satria tsy nomanina izany fahagagana izany. Ny vehivavy dia azo inoana kokoa noho ny lehilahy saro-piaro satria natahotra ny ho irery indray.
Saingy mitranga izany fa tsy azo atao ny mamaly ny fanontaniana ny antony mahatonga ny vehivavy na ny lehilahy hialona, ​​io fahatsapana io dia mitombo noho ny antony tsy fantatra, misy izy io na inona na inona fitondran-tenan'ny olon-kafa. Izany toe-javatra izany dia antsoina hoe fahasarotam-piaro mahatsiravina, amin'ny vehivavy dia tsy dia mahazatra loatra noho ny firaisana ara-nofo.
Ahoana no hanaisotra ny fahatsapana ho fialonana?
Vehivavy marobe no ampijalian'ny fanontaniana amin'ny fomba hanalavirana ny fialonana ny lehilahy, ary tsy hahita valiny. Ary izany dia noho izy mitady olan'ny olana, izay matetika no tsy. Mazava ho azy fa raha manambady mivady amin'ny lehilahy hafa ny vehivavy, na mandefitra fifandraisana amin'izy ireo, dia mihoatra noho ny fanamarinana ny fialonana. Saingy raha tsy misy na inona na inona, dia angamba ny olana ara-tsaina rehetra ataon'ny lehilahy be fialonana. Izany no antony mahatonga anao hifandray amin'ny manam-pahaizana manokana iray dia mila mahafantatra ny hevitr'ireo andaniny roa ireo. Na izany aza, raha tsy manomboka ny tranga, afaka manaisotra ny fahatsapana ny fialonana ianao, saingy, tahaka ny filalaon'ny hafa rehetra dia mila mahatsapa ny olana misy sy ny faniriana marina hamaha azy.
Raha saro-piaro amin'ny olona iray ianao, dia mila mamaritra ny anton'ny zava-mitranga. Rehefa nahita ny antony dia ilaina ny miresaka momba izany amin'ny alalan'ny fialonana, mba hitadiavana fomba iray hiatrehana ny toe-javatra.
Ilaina fotsiny ny miseho ny ahiahiana kely, toy ny zavatra kely manomboka miseho, izay milaza fa tanteraka tanteraka ilay mpamadika, ny sasany mieritreritra fa ny "ampahany amin'ny mozika" dia manomboka maka endrika, fa raha ny marina dia izany rehetra izany. Noho izany, tsara kokoa ny manontany ny hevitrao, mamela ny fihetseham-po ary mijery tsara ny toe-javatra.
Matetika, raha tokony hiresaka momba ny ahiahiny izy ireo, dia aleon'ireo olona manao fanatsoahan-kevitra haingana, ary mandresy lahatra ny tenany fa nisy ny famonoan'olona. Aza manao izany, satria na dia mety hampihomehezana aza ny sary mampihomehy dia tsy fantatrao mihitsy hoe iza no te hanimba ny fahasambaranao.
Ny ankizivavy dia mialona amin'ny tovolahy, afa-tsy ny mijery ny masony eo amin'ny fitondran'ny zazavavy iray hafa. Saingy raha tsy misy antony hafa dia tsy mety ny fihetsika toy izany, ary raha tokony handany ny herinao amin'ny fialonana, dia tsara kokoa ny mikarakara ny tenanao - mankanesa any amin'ny toeram-pivarotana zavatra vaovao, manamboatra lamandy na manika vaovao. Mianara avy amin'ireo olona izay manandratra ny fijerinao ho an'ny lehilahy, fa tsy mialona azy.
Ny psikolojia , mazava ho azy, dia afaka mamaly ny fanontaniana mikasika ny fomba hisorohana ny fialonana, fa raha ny fihetseham-pon'ny saina iray, dia azo ampiharina amin'ny manam-pahaizana ihany io fahalalana io. Noho izany, raha manana tranga toy izany ianao dia tsy ho tonga any amin'ny psikology intsony ianao.
Ahoana no ahafantaranao fa ity no olonao?
Ahoana no ahitanao mpanankarena manan-karena?
Ahoana ny famongorana lehilahy avy amin'ny namana?
Ahoana no fomba hampianarana lehilahy iray noho ny tsy fanekena azy?
Fomba hampifaliana ny malalanao?
Ahoana no hialana amin'ny lehilahy?
Love Triangle - inona no tokony hatao amin'ity toe-javatra ity?
Toast ao amin'ny lafaoro
Fitaovan'ny rivodoza ho an'ny ririnina
5 jailbreaks tsara tarehy
Ahoana no hivarotana trano raha misy fisoratana anarana voaray?
Neurogenic bladder in women
Kanye West dia nanimba ny Selfie Kim Kardashian
Maskety ho an'ny vovoka sy vaky volo
Jirama Romanina amin'ny varavarankely plastika
Lamina laminasa eo amin'ny lakozia
Megan Markle sy Patrick Jay Adams dia nandao ny "Force Majeure" taorian'ny vanim-potoana fahafito
Kitapo fonenan'ny MDF
Famaranana andro amin'ny ronono
Courtney Kardashian dia namoaka sary mifangaro miaraka amin'ny tovolahy iray
Mangatsiaka amin'ny trondro
Mango Spring-Summer 2013 Collection
Vyacheslav Zaitsev - fanangonana